5 Best Cities Ukuze Visit Kuba wokubulela EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Best Cities Ukuze Visit Kuba wokubulela EYurophu
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 25/01/2021)
Ukubulela ebesoloko iholide zemveli kakhulu ajikelezayo intsapho, ikarikuni, kanye football. kunjalo, nabo phakathi kwenu abakuthandayo hamba kwaye usebenzise ebishiywe ekhawulezayo kufuneka acinge ukuchitha eli xesha leeholide nyaka kwenye yezi Cities Best Lokundwendwela for wokubulela eYurophu.
Le ilizwekazi endala unalo Cities Best Lokundwendwela for Thanksgiving. Nangona lonke ilizwekazi laseYurophu ephawulekayo, kuphela khetha isibini lwezixeko yanendumasi engaka ngokwenene kutyelela for Thanksgiving.
EYurophu idla zisilele kunye nabakhenkethi, kodwa enye ngeke sithethe okufanayo ekupheleni uNovemba. Yiyo loo nto kule nxalenye lonyaka lixesha ogqibeleleyo ukutyelela izixeko zamandulo, ukuvelisa Ukubonga izithethe kunye nokutya enkulu kunye nemibala ukuwa mihle.
Enoba American okanye European, olu luhlu lulandelayo lemizi kufuneka ibe zokufikela zakho ephezulu nakufuphi Thanksgiving.
Ukuze Qala uhambo lwethu Best Cities Lokundwendwela kuba Thanksgiving we wathatha – wasebenzisa, Bheljiyam
Ukuze ukubeka aligqibe, Bruges sisixeko yokwenene imilingo iyeza ngqo esithile fairytale endala. ngokwendalo, lo kwidolophu endala kulapho bonke ubuxoki ubuhle. Ivela ngqo ukusuka era Medieval, yaye apha uya kufumana ezininzi izakhiwo bamandulo mesmerizing.
Unga thatha ride iphenyane ngokusebenzisa misele yenzeka loo dolophu kwaye bakhangele wamangaliswa zonke izakhiwo amahlamvu awo ezigqunywe. Yintoni egqithisile, ngokuba Novemba, yonke into ibukeka dreamlike eyongezelelweyo ngenxa yonke imibala ukuwa elihle.
Awukwazi uhambe okungalungile ngokutyelela Bruges ngenxa yombulelo eYurophu. Ungaze hop kuloliwe kule dolophu ukwenza amava wonke extra emangalisayo! kwaye siqinisekile ngokukhawuleza nje ukuba ugqibezele iholide yakho, uya kwabelana le 5 Best Cities Lokundwendwela wombulelo e post blog eYurophu.
Rotterdam ku Bruges Uqeqesha
Utrecht Bruges Uqeqesha
I-Hague ku Bruges Uqeqesha
Norway ukude emantla abandayo, kodwa Oslo ke Okuhle kule iindawo leli lizwe. Esi sixeko ngoko yindawo ogqibeleleyo abo bamthandayo imozulu kubanda kodwa awukwazi ukuthatha ifiva zemvula eNorway.
Oslo entsonkothe ​​ngokwenene kule nxalenye konyaka ngenxa zonke ukuwa komlingo imbonakalo yelizwe. Plus, ufumana ukuze ubone Lights Northern ezo kubonakala kweli lizwe, into enye umntu kufuneka?
Mhlawumbi ukufumana emveli Thanksgiving uhlobo lokutya othandana ukuze, kodwa amava ufika ukuba i kakhulu, kulungile. Nangona le menu ayikho ezahlukahlukeneyo njengoko ujongile ufuna, i eNorway kunjalo ezininzi ngokutya umdla ukunikela. Umzekelo, emva i hotdog yemveli Norwegian. kunjalo, its eliphekwe stock yenkomo yaye bubhijelwe lefse, a flatbread eyenziwe ngomgubo, amazambane, kunye nobisi.
Ukususela kwiipaka emangalisa zoluntu kunye iinqaba endala Viking olondolozo lwembali, uya ube eninzi ukwenza e Oslo. Siqinisekile ukuba uya ufuna ukuchitha ngaphezulu kwiintsuku nje ezimbalwa kulo mzi omangalisayo.
I-Oslo lolona khetho lwethu lusenyakatho 5 Best Cities Lokundwendwela for wokubulela eYurophu.
London, Izikumkani Ezimanyene
Awunako akunakwenzeka ukutsiba London. Bonke bavile ngayo, kwaye wonke iyalithanda. Yintoni nakakhulu, uya kuwa uthando ngalo ekwindla. Isixeko omkhulu, kodwa ukuba apho offseason lixesha egqibeleleyo ukutyelela amanye ngokuqhelekileyo kwiindawo ezinabantu.
Plenty ka-izehlo kwenzeka ngeli xesha lonyaka, ukuze xa wena i imisebenzi fan, uya umthanda London. Ngaphezu, i parks ekwindla kungaphezulu ezimangalisayo. Kensington Gardens, Greenwich Park, no Windsor Great Park ezinye zezulu ezininzi uhlobo uza ufuna ukutyelela.
Abo kuni ingqalelo ukutya ukuba abe yinxalenye ebalulekileyo ye Thanksgiving, uya isabelo sakho fair eLondon. Le ndawo ukutya apha ayiphucukanga yaye bahlukahlukene emva enye kwizixeko ezinkulu lithi. Kuya kubakho into kukhetho wonke.
Iqela elingcono malunga ukuya eLondon kukuba kukho ezininzi imigca kaloliwe odumileyo ukuba emke yezwekazi Yurophu eLondon, efana naleyo evela Amsterdam, Paris, yaye Berlin, zonke ezifundisa amava omangalisayo ubuke emaphandleni kunye edlula Eurotunnel phantsi IsiNgesi Channel okanye njengoko French bayibiza - La Manche.
Uyazi nakanjani malunga Swizalend, kwaye iintaba zemilingo, kodwa kungenzeka bangevanga malunga Lugano. Yinto isixeko eqaqambileyo engasezantsi Switzerland, kufuphi nomda Italy.
Esi sixeko kunxweme a mesmerizingly eluhlaza ichibi emazantsi Alps, apho isandi phantse omlingo. loo nto kuphela kufuneka yanele ukuba ukuba bachithe Ukubonga wakho eYurophu apho, ILugano lolona khetho lwethu lukhethekileyo kwiidolophu ezigqibeleleyo zokundwendwela umbulelo.
Ngaphezu, besiya naxa bevela kulo mzi nge loliwe ngamava obungayiwayo ngokwayo. Yiloo yeyona ndlela ilungileyo ukonwabela ubuhle elinye kwiingingqi ezininzi mihle yaseYurophu. Ngaphezu, uya kunandipha uhambo ngenxa oololiwe kumnandi ngokwabo, njengoko i Swiss unayo enye kakhulu umgangatho oololiwe eYurophu.
Basel ku Lugano Uqeqesha
Bern ku Lugano Uqeqesha
Ilusini ku Lugano Uqeqesha
Zurich ku Lugano Uqeqesha
Thina Akunakwenzeka ukuba imali ukutsiba isixeko engunaphakade kwezibane. njalo iParis ngomnye imizi watyelela kwihlabathi ngenxa yesizathu. kunjalo, isoloko ndlela kakhulu ezixineneyo apho nto emva Novemba lixesha ogqibeleleyo ukutyelela. Plus, akuyi engqondweni imibala ukuwa spellbinding.
Yintoni egqithisile, Paris ngo November a iparadesi for Instagramers. Akuyi kuba nako ukuyeka ukuthatha imifanekiso xa ulapha. Kungcono, eya kuqinisekisa ukuba ufumana uhambo apho uya ukhumbule ngonaphakade.
Ke ukuba ukudla, kuhle, niyazi indlela e France; nangaphandle, IParis i ezizwe ezinkulu emhlabeni. Udala a Thanksgiving oko kuya kuba lula kakhulu, kwaye uya kufumana ithuba ukongeza umsi kuyo. Akuyi kuba nako ukuyenza loo kwenye. kuphela Paris ukwazi ukunikeza ukutya kunye indawo eya astonish nkqu umhambi pickiest.
Into kuphela ukuba kuphuculwe adventure ukuba ukubamba uloliwe uye nge ezisemaphandleni French. Kuya kuba nakho okungcono!
Chitha Best Thanksgiving kwi Cities Best Lokundwendwela for wokubulela eYurophu
Sikwazi ukuya kwi yaye ukuthetha le mizi. Ngaphezu, thina sikuxelele kwezinye iindawo ukuba nabo bafanelwe iivoti zakho ngeenxa Thanksgiving. Ummandla wohlobo lonke Jemani , i North of Italy ne Milan ikakhulu, Scotland, kwakunye nokunye okuninzi. Umbulelo e Europe inokuba ngamava endingasokuze kuyo nayiphi na kwezi.
Naphi na apho ugqibe ukuya ekupheleni, kufuneka uqale uqonde ehamba ngololiwe. Njengabo wathi izihlandlo ezininzi, ezinye zezi ndawo ukukunika amava epheleleyo ngokwenene ngaphandle undwendwela kubo ngololiwe. Kuphela ngaloo ndlela uya kuba nako ukufumana magic of Europe ngokwenene. Qhagamshelana Gcina A Isitimela ukufumana amatikiti akho ngokukhawuleza kuba uMbulelo sele ulapha!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
europetravel London longtrainjourneys Thanksgiving train Travel uhambo ngololiwe zoorbelgium travelfrance travelnorway indawo yokuhamba